Mandehana mitsangatsangana any Arabia Saodita amin'ny fizahan-tany raha vaksiny ianao
Home » Lahatsoratra farany farany » malaza ankehitriny » Mandehana mitsangatsangana any Arabia Saodita amin'ny fizahan-tany raha vaksiny ianao
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao lafo vidy • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Hanokatra ny sisintaniny amin'ireo mpizahatany iraisam-pirenena i Arabia Saodita manomboka amin'ny 1 Aogositra 2021. Ireo mpitsidika avy amin'ny firenena 49 dia afaka mizaha ny Fanjakan'i Saudi Arabia, raha vita vaksiny tanteraka.
Nanamora ny famerana ny sisintany i Saudi Arabia taorian'ny fanidiana COVID-19 manerantany.
Ny olom-pirenena avy amin'ny firenena 49 dia afaka mahazo visa e-fizahan-tany.
Niarahaba ny fanjakana ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany fa nanokatra ny vavahadiny ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Arabia Saodita dia mamatsy vola an'arivony tapitrisa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, tsy ho an'i Saudi Arabia ihany fa ho lasa ivon-toerana manerantany ho an'ny tontolon'ny mpitondra fizahan-tany hiara-hametraka sy hametraka fironana.
Hatramin'ny 1 Aogositra, ity famatsiam-bola ity dia hanomboka hamatsy vola indray ho an'ny Fanjakana, rehefa misy olom-pirenena avy amin'ny firenena 49 nasaina hitsidika tontolo vaovao.
Tamin'ny dinika vao haingana nokarakarain'ity publication ity sy ny Toko Saudi Arabia ao amin'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany, dia nanamarika: i Arabia Saodita dia manana drafitra lehibe ary manana kaonty momba ny zava-bita lehibe tsy amin'ny fametrahana ny Fanjakana eo afovoan'ny fizahan-tany ihany fa mba hananganana toerana tena fivorian'ireo mpizahatany manerantany.
Naneho ny heviny Andriamatoa Andriamatoa Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud, filohan'ny WTN Saudi Arabia Chapter i Arabia Saodita dia manana fikambananam-piangonana lehibe sy fizahan-tany ary fandraisana andraikitra, anisan'izany ny World Tourism Organization (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC), ary ny Global Tourism Resilience and Crisis Management Center (GTRCMC).
Ny fepetra: mila vaksiny feno ireo mpitsidika te-handeha amin'ny fanjakan'ny Saudi Arabia.
Ireo manana visa mpizahatany izay vita vaksiny feno amin'ny COVID-19 dia afaka miditra amin'ny firenena manomboka ny 1 Aogositra 2021, nefa tsy mila hatokana ho an'ny tany. Mila manome porofo ny mpitsangatsangana iray amin'ny iray amin'ireo vaksiny 4 ekena ankehitriny: dosie 2 amin'ny vaksinin'ny Oxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech, na Moderna na doka tokana an'ny vaksinina novokarin'i Johnson & Johnson.
Ireo mpitsangatsangana izay nahavita fatra roa tamin'ny vaksinin'ny Sinopharm na Sinovac dia horaisina raha nahazo doka fanampiny amin'ny iray amin'ireo vaksiny 4 nankatoavina tao amin'ny Fanjakana izy ireo.
Saudi Arabia dia nanokatra vavahadin-tranonkala ao amin'ny https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home ho an'ireo mpitsidika hisoratra anarana ny satan'ny vaksiny. Hita amin'ny arabo sy anglisy ny tranokala.
Mba handraisana ireo mpandeha dia nanatsara ny Tawakkalna, làlana nahazo ny loka, ary ny app trace ny Saodiana mba hahafahan'ny mpitsidika tsy maharitra misoratra anarana miaraka amin'ny antsipirian'ny pasipaorony. I Tawwakalna dia takiana amin'ny fidirana amin'ny toerana maro amin'ny besinimaro ao Saudi Arabia, anisan'izany ny toeram-pivarotana, sinema, trano fisakafoanana ary toeram-pialamboly.
Ny fanambarana dia efa ho valo volana taorian'ny nanantonana ny fizahan-tany iraisam-pirenena tany Saudi Arabia noho ny areti-mandringana COVID-19. Nanangana ny programa e-visa fizahantany i Saudi Arabia tamin'ny septambra 2019.
"Miandrandra ny hamoha ny varavarana sy ny fony amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena i Saudi," hoy i Fahd Hamidaddin, tale jeneralin'ny Saudi Tourism Authority (STA). "Nandritra ny fikatonan'ny asa dia niara-niasa akaiky tamin'ny mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina izahay mba hahazoana antoka fa ny mpitsidika ny Saodiana dia afaka mankafy fiainana tsy hay hadinoina, tena izy ary indrindra indrindra, traikefa azo antoka ho an'ny tenany sy ny olon-tiany. Ho gaga sy faly ireo mpitsidika mitady toerana vakoka tsy voadinika, traikefa ara-kolontsaina tena izy, ary hatsaran-tarehy voajanahary mifoka rivotra, ary faly mahita ny fandraisana an-dry zareo Saodiana. ”
Ny fanambarana ny famerenana indray ny fizahantany dia tonga rehefa nanangana ny fampielezana vanim-potoana fahavaratra i Saudi Arabia tamin'ny taona 2021, ary nitondra zava-manintona sy hetsika vaovao vaovao ho an'ny firenena. Ny fanentanana vaovao dia antenaina fa hitaky fangatahana latent lehibe eo amin'ny mponina sy ny isam-paritra, indrindra ho an'ireo hetsika fialamboly lehibe kokoa, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fepetra hifehezana ny fihanaky ny coronavirus.
Jeddah Old City Buildings and Streets, Arabia Saodita
Na eo aza ny areti-mifindra, ny 2020 dia taom-pialan-tsasatra ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany any Saodita rehefa nitety ny firenena ny olom-pirenena sy ny mponina - maro no sambany - nahafahan'ny fitohizan'ny hetsika sy ny vokatra vaovao talohan'ny nisokafan'ny iraisam-pirenena.
Ny fampielezana ny fotoam-pahavaratra Saudi Arabia tamin'ny taona 2020, izay nifanelanelana tamin'ny volana Jona sy septambra, dia nitombo 33% amin'ny fandaniana amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary fialamboly ary hetsika ara-kolontsaina raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taona 2019. ho an'ny toerana sasany efa ho 50%.
Arabia Saodita dia nanolotra ihany koa ny fanomezana fitsangatsanganana an-tsaha voalohany indrindra nanerana ny Ranomasina Mena tamin'ny sambo fitsangantsanganana Silver Spirit, tamin'ny volana septambra 2020. Ny cruise dia atolotra indray ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra, miaraka amin'ny MSC Belissima mivoaka avy any Jeddah eo anelanelan'ny Jolay ary septambra.
Andiam-pitsipika feno momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ary ny fanandramana manerana ny firenena momba ny COVID-19 dia nanome antoka fa ny fitomboan'ny fizahan-tany dia tsy niaraka tamin'ny fiakaran'ny tranga coronavirus. Saodiana dia nanoratra tranga coronavirus maherin'ny 14,700 25,153 isaky ny olona iray tapitrisa, ambanin'ny salan'isa manerantany XNUMX XNUMX tranga isan-tapitrisany ary ambanin'ny toerana mafana indrindra fizahan-tany mahazatra.
Nahavita vaksinin'ny COVID-19 i Arabia Saodita tamin'ny olom-pirenena sy mponina rehetra, ary mihoatra ny 25 tapitrisa ny fatrany hatramin'ny 28 Jolay. Mihoatra ny antsasaky ny olom-pirenena sy ny mponina saodiana no nahazo ny tifitra voalohany ary ny iray raha dimy dia nahazo fatra roa tamin'ny vaksininy.
Ny mpitsidika rehetra dia angatahina mba hitandrina ny fepetra fitandremana ankatoavin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana izay misy ny fanaovana sarontava amin'ny imasom-bahoaka sy ny fihazonana ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Ny olom-pirenena avy amin'ny firenena 49 dia afaka mahazo visa fizahan-tany, azo iantohana ao amin'ny Tsidiho ny tranokala Saodiana. Ho an'ny fampahalalana farany momba ny takiana amin'ny fidirana, indrindra avy amin'ireo firenena manana coronavirus vaovao, ny mpitsangatsangana dia tokony hanamarina ny mpitatitra alohan'ny hamandrihana.